Si looga falceliyo, ama aan laga falcelin?
Qaabka falcelinta waxay ka dhigi kartaa boggaga internetka (codsiga) inay dareemaan inay jiraan sixir ku hoos duugan yihiin iyada oo faahfaahinta dashboard-ka lagu hayo bulsho adeegsade firfircoon, oo kale ah khibradda aad ka filayso Facebook iyo Twitter.
Haddii aad isticmaasho hal shay oo falcelin ah oo ku yaal bogag kooban, markaas waxaa jira siyaabo aad ku xaddidi karto koodka falcelinta goobta iyo marka loo baahan yahay. Qor dhinaca server-ka, (ama xitaa dhinaca macmiilka), kood ku xidhan si aad ugu shubto. Haddii aad rabto inaad sameyso oo dhan waa awood hababka soo booda, menus interactive, Iyo nuxurka tabcan iwm., markaa qiimaha vs. faa'iidada tixgelinta ee maktabadaha falcelinta ah kama eexan doono iyaga oo ka soo horjeeda hababka kale.
Xeeladaha soo bandhigista ee SEO
Halkan ka daawo doodii oo dhamaystiran.
Barnaamijyada codsiga ee macnaha guud waxay caadi ahaan ku lug leeyihiin wax ka badan maktabadda hore oo keliya. Heshiiska qaabeynta qaabeynta faylka qaabeynta oo leh qoraallada tas-hiilaadka ayaa ka koobnaan kara waxa loo tixraaco qaab-dhismeedka React ama Vue. Xiga iyo Nuxt waa hab-dhismeedka React iyo Vue ku salaysan NodeJS siday u kala horreeyaan.
Qaab-dhismeedyadu waxay fududeeyaan faylalka mashruuca iyo adeegyada is-daba-marin iyadoo loo eegayo qeexitaannada caadiga ah iyo hababka ugu wanaagsan. Russ waxa uu na siiyay isku xirka mashaariicda GitHub ee muujinaya sida loo dhexgeliyo React iyo Vue dhowr luqadood oo kale oo caan ah. Hubi haddii aad rabto nidaam runtime ka duwan xagga dambe ee NodeJS.
Qodobbada koodka SEO ee leh NodeJS
Markaad gaarto shuruudaha heerka ganacsi ama bilawga, heshiis heer adeeg oo leh qaab dhismeed ayaa laga yaabaa inaanay suurtogal ahayn. Russ wuxuu nagu socdaa iyada oo la bilaabayo jajabyada koodka SEO ee ku salaysan NodeJS (oo leh Express) oo keliya.
Saddex fayl oo muhiim ah oo ku jira muunadda React iyo Vue labadaba waxay ka kooban yihiin koodka lagama maarmaanka u ah falanqayntayada:
The app.js faylka ayaa maamula qolofka abka "blog".
The server.js Faylku wuxuu jiidayaa maktabadda Express, wuxuu u habeeyaa wax ka qabashada codsiga oo ay ku jiraan hababka wax-soo-saarka ee SSR.
Faylka index.js, wuxuu u adeegaa sidii meesha laga soo galo NodeJS habka socodsiinta wakhtiga.
The App.js tusaale ahaan React waxay tusinaysaa dariiqa saxiibtinimada SEO ee URL-yada aan ku tiirsanayn jajabka qaabka SPA bogga dalwaddii aragtiyo. Gudaha server.js Shayga xogta 'context' wuxuu tusinayaa faahfaahinta kheyraadka wicida ReactDOMServer.renderToString() si aan appkeena uga dhigno qolofka macnaha guud ee ku salaysan URL iyo shuruudo kale oo suurtagal ah.
The server.js faylku waxa uu leeyahay shay macnaha guud ee xogta si loo hagaajiyo. Russ wuxuu muujinayaa beddelka cinwaanka iyo xogta kale ee meta si loo dhamaystiro SEO ee qolofka app ee la dhisay ka hor inta uusan ugu dambeyntii u dirin biraawsarkaaga.
Ugu dambayn, index.js waxay u adeegtaa sidii barta bilawga ah ee habka NodeJS iyo ReactDOM.hydrate() Waxa loo istcimaalaa in lagu soo saaro abkayaga oo leh wax ka yar oo muhiim ah ka dib marka qolofku buuxsamo.
Hagaha 'dhis' ayaa ka kooban index.html sida file bartilmaameedka dhismaha template SSR. Laba fayl oo kale, qaybaha Bogga ugu weyn iyo Posts, waxaa lagu kaydiyaa iyadoo la isticmaalayo a .js kordhinta, kaas oo si maldahan u dhigaya heshiis sidaa darteedna aan loo baahnayn in si cad loogu qeexo bayaanada soo dejinta. Waxaan si degdeg ah u dhaafi doonnaa falanqaynta faylalka qaybaha, marka laga reebo in aan nidhaahno waa wax caadi ah in la helo faylalka qaybaha oo dib loo habeeyay qaybbuug-hoosaadka.
Tusaalooyinka Russ, dhammaan faylasha, oo ay ku jiraan faylalka qaybaha, waxay ku yaalliin tusaha saldhigga mashruuca. Tani waa sida uu u egyahay geedka hagaha ee faylasha React:
Russ ayaa isticmaala falcelinta-router-dom maktabadaha (oo laga yaabo inaad u baahato inaad ku rakibto NPM): Router iyo StaticRouter, Switch, iyo NavLink. Maktabadahani waxay bixiyaan caawiyayaal diyaarsan si ay ugu habboonaato hawlaha caadiga ah, sida isticmaalka NavLink 'to' caawiyaha si ay u abuuraan xiriiriyeyaasha HTML ee url ama kheyraadka, kaas oo la siman yahay caawiye 'link_to' Rail.
Iyada oo loo marayo Switch iyo router gudaha App.js Russ waxa uu muujiyaa syntax-ka la isku waafajinayo waddooyinka url. U fiirso erayga muhiimka ah ee 'saxda' ee bayaanka tuska tuska. Waxa loo baahan yahay inay si sax ah u wajahdo '/' ama waxay la mid noqon doontaa waddo kasta oo codsiga ah! Isticmaalka ereyga muhiimka ah ee 'saxda' ah wuxuu beddelaa shuruudaha caadiga ah ee tartanka hunguriga ah ee u dhigma '/posts' iyo sidoo kale '/posts/hello-world' iwm.
In server.js Russ waxay isticmaashaa qaab-dhismeedka dibadda ee caadiga ah ee loo yaqaan Express si uu u dejiyo codsigeena dhegeystaha dekedda loo baahan yahay iyo hababka jawaabta loo baahan yahay si loogu adeego abkayaga shabakadda. Haddii aad ka shaqaynayso maxali ah, waxaad u baahan doontaa inaad samayso PORT doorsoome deegaan deegaanka si ay u dhigma deked furan oo aad qorshaynayso inaad kula shaqeyso codsiyada localhost. Wax soo saarka, tani waxay badanaa u baahan doontaa in lagu dejiyo dekedda 80.
Russ wuxuu noo tilmaamayaa dukumeentiyada Vue SSR iyo qaybihiisa koodka waxay ku shaqeeyaan iyagoo isticmaalaya asal ahaan qaab dhismeedka faylka iyo qaabka loogu talagalay hirgelinta nooca Vue ee abkayaga blog. Ka hel koodka React iyo Vue labadaba waxaad ka heli kartaa hoosta qoraalka soo socda.
Sida Macaamiisha Hootsuite ay ku gaadheen Isbadalka Bulshada
SEO: Sida loo dhaqaajiyo Skydivers iyada oo loo marayo Funnel